नयाँ दैनिक | अन्तर्वार्ता अन्तर्वार्ता – नयाँ दैनिक
म नेतालाई ‘देवता’ मान्दिन : लेखनाथ न्यौपाने (अन्तर्वार्ता)
परिवर्तनको पक्षमा लड्न, लेख्न र बोल्न सक्ने मान्छे सीमित हुन्छन् । त्यसैमाथि सरल जीवनशैली, गहिरो अध्ययन, निष्ठा र प्रखर वक्तित्व क्षमता जो कोहीमा हुँदैन । सिद्धान्तलाई व्यवहारमा खोज्ने र निष्ठाको बाटो रोज्ने सिमितमध्येका एक अभियन्ता हुन्– लेखनाथ न्यौपाने ।
राजनीतिमा सक्रिय पछिल्लो पुस्ता गम्भीर छलफलसहित सक्रिय, नैतिकव...
विपीसँग हात मिलाउन पाइनँ : नेता बिजुक्छे
नेपाली कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ता पार्टीका संस्थापक विश्वेश्वर प्रसाद (विपी) कोइरालालाई महामानव भन्ने गर्छन् । निधन भएको करिब ३६ वर्ष भैसके पनि विपी नेपाली राजनीतिमा उत्तिकै स्थापित छन् । नेपाली कांग्रेसमाथि नेता विपीकै व्याज खाइरहेको आरोप पनि लाग्ने गर्दछ ।
राणाशासन विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व विपीले नै गरे । जानकारहरु भन्दछन्– विपीको ...
निजीकरणका विरुद्ध निरन्तर लड्छौँ : सिंह
सत्तारुढ दल नेकपा निकट अखिल (क्रान्तिकारी)की केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्– पञ्चा सिंह । माध्यमिक तहको औपचारिक शिक्षा पूरा नगर्दै उनी जनयुद्धमा होमिइन् । बि.स.२०४३ साल मंसिर २० गते सिम्खेत–४, कालीकोटमा जन्मिएकी सिंहले शान्तिप्रक्रियामा आएपछि बल्ल रोकिएको औपचारिक शिक्षालाई निरन्तरता दिएकी हुन् । इतिहासमा स्नाकोत्तर गरिसकेकी नेतृ सि...
सरकारी स्कुल हामीले नै जोगाएका हौँ : मल्ल
माघ ६, काठमाडौँ । असमान शिक्षा र समान प्रतिष्पर्धा भयो भन्दै तत्कालिन अखिल (क्रान्तिकारी)ले जनयुद्धकालमा निजी विद्यालय बन्द गर्ने अभियान चलाएको थियो । गाउँका अधिकांस बोर्डिङ बन्द भए । शहरका पनि स्कुल बन्द गर्न दवाब दिइयो र कतिपयमा भौतिक आक्रमण नै भयो । त्यसो नगरेको भए उहीले नै गाउँगाउँबाट सरकारी विद्यालय विस्थापित हुने अखिल (...
डा.केसीको ‘अनसन’ ठीक कि बेठीक ?
प्रथम कुरा– डा. केसीले नेपालमा कलेज चाहिँदैनन् भनिरहेका छैनन् । सरकारी कलेज खोलौं, काठमाडौभन्दा बाहिर नभएका ठाउँमा खोलौं र नयाँ विश्वविद्यालयबाट खोलौं, पैसा नहुने तर जेहन्दार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढ्ने वातावरण बनाऊ र दुर्गममा सेवा गर्न पठाऊ भनिरहेका छन् :
१. नेपालमा थप मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर डा. केसीले हजारौंका सङ्ख्यामा विद्यार्थी...
‘प्रचण्ड नै नेपाली राजनीतिको स्ट्राइकर’
पुस २३, काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपाका नेता हरिराज अधिकारी ‘कुमार’ले प्रचण्ड नै नेपाली राजनीतिको ‘स्ट्राइकर’ भएको दावी गरेका छन् । गोखरा–१, बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद समेत रहेका नेता अधिकारीले नयाँ दैनिकसँग कुरा गर्दै यस्तो दावी गरेका हुन् । प्रचण्डकै नेतृत्वमा नेपाली राजनीतिमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको उनले दोहोर्या...
पुस २१, काठमाडौँ । युवा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष माधव बास्तोलाले राजनैतिक र वैचारिक काममा युवा नेतृत्व चुकेको बताएका छन् । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा युवाहरुले सरकारलाई सहयोग गर्ने र प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा युवा संघ र वाइसिएलको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरु निस्क्रिय भएकोमा उनले असन्तुष्टि समेत प्रकट गरे । नयाँ ...
कुर्सी प्राप्त गरेपछि मान्छे अन्धो हुन्छन्ः सिटौला
पुस १२, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला तेस्रो धारका नेता हुन् । सिटौलाले अहिले देउवा र पौडेल भन्दा बेग्लै गुटको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसैसाता सम्पन्न महासमिति बैठकमा आफ्नो समूहको लाइन अनुसारको विधान पारित भएको सिटौलाको दाबी छ ।
‘विधान ल्याउन मेरो हस्तक्षेपकारी भूमिका नै भयो । अहिले जुन विधान आयो, त्यो शेरबहादुरज...